ဝက်သားပေါင်း | Wutyee Food House
« RoseMary Potato
တန်ပူရာ ဂဏန်းပျော့ကြော် »
May 28, 2010 by chowutyee ၀က်သားပေါင်း
၁။ ၀က်သား – ၁၀ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၂။ ပုဇွန် – ၁၀ကျပ်သား (အခွံခွာပြီး နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၄။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၅။ ကော်မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၆။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၇။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၈။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၀။ ကြက်ဥအကာ – ၂လုံး (ခလောက်ပေးပါ)
၁၁။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – အနည်းငယ်
၁၂။ ဖက်ရွက် (Wanton Sheet) – ၁၅ရွက်
၁။ နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော ၀က်သားနှင့် ပုဇွန်ကို ဇလုံတစ်ခုရော ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးမှ အစားသွပ်ရန် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ကော်မှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ) အားလုံးကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး ၀က်သားနှင့် ပုဇွန် ဖြင့် ရောနယ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ဖက်ရွက်တစ်ရွက်ယူပြီး ကြက်ဥအကာဖြင့် သုတ်လိုက်ပါ။
၄။ ပြီးမှ အစားသွပ်ရန် ရောနုယ်ထားသော ၀က်သားနှင့် ပုဇွန် (စားပွဲတင်ဇွန်း-၁ဇွန်းခွဲ) ကို ဖက်ရွက်ထဲထည့်ပြီး ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း ထုတ်လိုက်ပါ။
၄။ ထိုနည်းအတိုင်း ကျန် ဖက်ရွက်များဖြင့် ဆက်လုပ်ပါ။
၄။ ပြီးနောက် ပေါင်းအိုးထဲ ၀က်သားပေါင်းများကို ထည့်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါင်းပေးပါ။
၅။ အသင့်စားနိုင်သော ၀က်သားပေါင်း လေးများကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 12 Comments	12 Responses
on May 28, 2010 at 7:38 am | Reply hmone
love it…look very delicious…the best for breaksfast …hungry😦
on May 28, 2010 at 12:56 pm | Reply chowutyee
Hey Hmone Gyi yay… Yes I cooked it for breakfast… Dad like it so much… hee🙂
on May 29, 2010 at 3:20 am | Reply mon
on May 29, 2010 at 6:25 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ကြက်သားနဲ့လုပ်လည်း အရသာစားလို့ကောင်းပါတယ် မမွန်။ ၀က်သားပေါင်းတော့ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကြက်သားပေါင်းပေါ့… 🙂
on August 29, 2010 at 10:58 pm | Reply mie
Thanks wutyee.It was delicious after making.But it became hard when it is cold.So How do you store before eating it?
on August 30, 2010 at 2:48 am | Reply chowutyee
Ma Mie, အအေးခန်းထဲ ထည့်ပြီရင် မစားခင် ပေါင်းအိုးဖြင့် ပြန်ပေါင်းပေးပါ…🙂
on September 3, 2010 at 10:59 am | Reply lyk
လုပ်စားမယ် .. အရင်က ဆိုင်မှာပဲ ၀ယ်စားနေရတာ ..
on September 4, 2010 at 3:25 am | Reply chowutyee
lyk ရေ ဒီဝက်သားပေါင်းက အရမ်းစားလို့ ကောင်းတာမို့ လုပ်စားဖို့ မမေ့နဲ့နော်…😛
on October 6, 2010 at 10:14 am | Reply ko ko aung
Just remind u, my requested menu “pork leg soup” nt launched yt. Hee……he
on October 7, 2010 at 1:54 am | Reply chowutyee
အိုကေ တင်ပေးပါ့မယ်.. ၀တ်ရည် ခုတစ်လော အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေတာနဲ့ မတင်ပေးဖြစ်တာပါ… ဆော်ရီးနော်
on March 26, 2011 at 3:21 am | Reply Mu Mu Win
on May 14, 2012 at 2:03 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] May 28, 2010 ၀က်သားပေါင်း […]